yaraynayo Window / dhibaato kororsadaan
Muhiim yaraynayo Window / dhibaato kororsadaan
sano 2 3 bilood ka hor #316 by JanneAir15
Hello! Markii aan loo yareeyo suuqa kala FSX ah (waa on hab windowed) iyo inaan u fiirsado wax laakiin markaas waxaan doonayaa inaan dib ugu FSX ka heli iyo waxaan loo kordhiyo doono suuqa kala laakiin ka dibna wax kasta tegi doonaa madow. Ma jiraan wax ay tahay ama ay jiraan kaliya qaar ka mid ah qaabab. Fadlan iga caawiyaan this! Oo weliba waxaan dhibaatadaan oo keliya diyaarado payware ah (PMDG 777, Aerosoft Airbus xidhmo) iyo Aadan Qabille waa Dardar FSX. Waxaan isku dayi doonaa mid aad si sawirro qaar ka mid ah gelin.
sano 2 3 bilood ka hor #317 by Gh0stRider203
Waxaan lahaa dhibaatadan dhawr jeer, Naftayda. mararka qaarkood HADDII AAN beddelo aragtida, taas oo ka caawisa, ama sug daqiiqo laba laftiisa nadiifi doonaa ilaa.
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #320 by Colonelwing
maalin wanaagsan Janne ,,
Waxaa dhici ii soo PMDG B737NGX on FSX DAHABKA Dardar iyo intii aan la isticmaalayo waxaa Key AltGr via gala in ugu yaraan aan suuqa kala ka screen Sim xagga daaqaddii ,, waxaa shaqada si fiican u could'nt, screen madow tiina oo kale ah. Laakiin haddii aan sidaas oo kale sameeyaan on diyaarad ma jiro payware ah ,, waxa oo dhan ka shaqeeyaan wanaagsan baxay arrinta.
sano 2 3 bilood ka hor #322 by JanneAir15
Dhab ahaantii waxaan hore u xalin this. Qof kasta oo kale dhibaato this tag link this: c-aviation.net/fsx-tweak/fsx-cfg-tweak-guide/
Oo halkaasaannu ka soo dejisan ee "UIAutomationCore.dll" iyo dar "HIGHMEMFIX = 1" in fsx.cfg ah. Taasi i caawiyey. Waxaad ka heli kartaa galka fsx.cfg ka% appdata% / Microsoft / FSX
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #325 by Colonelwing
info link Good ,,, waayo FSX
By Xusuuso waxa sida ay ahayd on site link in, haddii aad tahay on uumi FSX aad siinin baahida loo baahdo file this.
UIAutomationCore.dll - file maktabadda dll in hagaajinaysaa waxqabadka 32-codsiga in nidaamka 64-bit. Waxaad u baahan tahay si aad u soo dejisan meel aad folder ugu weyn FSX si looga hortago qaladaad OOM (kuwo kale). Ma loo baahan yahay in FSX Edition Steam.